Daawo: Qaabka uu u Towbat keeney Cabdiraxmaan Cabdishakuur - Awdinle Online
Daawo: Qaabka uu u Towbat keeney Cabdiraxmaan Cabdishakuur
December 9, 2019 (AO) – Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame Hoggaamiyaha Xisbiga Mucaaradka ah ee Wadajir ayaa ku dhawaaqay inuu Alle uga towbad keenay khaladkii ku jiray khudbadii uu ka jeediyay dalka Jarmalka ee dooda badan ka dhalatay.
Fariimo Muuqaalo ah oo aad badan uu soo duubay oo aad u kala duwanaa oo uu isku difaayey ayaa loo arkey kuwo aan habooneyn, hase ahaa muuqaalkii ugu dambeeyey ee uu soo duubay ayuu ku sheegay inuu Alle weydiisanayo cafis, isla markaana uu cafiyay culimadii ku xadgudubtay, isagoo ku baaqay in dooddii iyo falceliskii ka dhashay khudbadiisa inay halkaas ku idlaato.
Wuxuuna yiri sidan soo socota “Wax alle weydiisanayaa wixii khalad ah ee khudbadaas ku jirtay inuu iga cafiyo, alle ayaa uga towbad keenayaa, annigoo aaminsan towbada cida is ka leh inuu yahay Alle Subxaana Watacaala ,oo aysan qof bani’aadam ah towbada aysan laheyn, alle ayaa towbo weydiisanayaa, wixii gef ah ee khudbadaas ku jirtay”.
Asbuucyadii la soo dhaafay waxaa baraha bulshadu ay ku kulanto buux dhaafiyey doodo kulkulul oo ka dhashay hadal ka soo yeeray Cabdiraxmaan Cabdihakuur, kaasoo uu ka jeediyay dalka Jarmalka, waxaana hadalkiisa ka caroodey culimo fara badan oo ku tilmaamay Cabdiraxmaan Cabdishakuur inuu khalad weyn ku dhacay oo ay tahay inuu Alle uga towbad keeno.
Halkan hoose ka daawo muuqaalka C/raxmaan C/shakuur.
Previous articleWaa imisa Ciidamadda Itoobiya iyo kuwa Kenya ee Jooga Soomaaliya
Next articleDhibaato haysata Shirkadaha Diyaaradaha Soomaaliya